Wax ka ogow Danaha Isbaheysiga Badda cas ee Sucudiga & Somaliya. – XAMAR POST
Wax ka ogow Danaha Isbaheysiga Badda cas ee Sucudiga & Somaliya.
By Zakariye iiman On Apr 8, 2019
Siyaasadda cilmi ahaan uma baran, Xil siyaasadeedna ma qaban, waana sababta aan kuu leeyahay walaaloow/walaaleey, i fahamsii.
Waxa aanan fahmin!!!!!!!.
Sideey isku qabanayaan dhacdooyinka Hoos ku qoran & Doorka Somalida, waa muhim in lala socdo isbedelada ka dhacayo wadamada Geeska Afrika.
12- Talo ahaan: Waxaa haboon in loo helo, dad Aqoon u leh arrimaha isbedelka iyo Badda Cas, Soow ma haboono in la dhiiri galiyo Dhalin yarada soo baratay Cilmiga siyaasadda “Political Science” iyo khubarada kale ee Somalida ah, ma ahan shaqsiyaad Aniga oo kale ah oo aan Aqoon fiican u leheeyn arrimaha siyaasadda in lagu haleeyo , Aniga iyo kuwa ila midka ee aan ku taqasusin siyaasadu waa in aan ku ixtiraamno walaalaheena Bartay ama Khibrada u leh siyaasadda, kuna kaalmeeyno wixii karaankeena ah.Shaqa kastana Ciddii taqaan lagu aamino laguna gacan siiyo.
Maxay tahay ujeedada ka dambeysa in qarash badan uu ku baxo guurka sagal mustafe?
Wax ka ogow Xildhibaano iyo Ganacsato deyn ku leh dowladda Soomaaliya .